B. Zakrutkin, "uMama womuntu": isifinyezo. Funda isifinyezo sezinto indaba
On ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe, kuye kwalotshwa okuningi. Kudingeka siyinake ngokukhethekile indaba "Umama Man" V Zakrutkina. Heroine Ezazimzungezile - owesifazane elula Russian lakuthola ukuhlushwa akunabuntu. Kodwa ngenxa impilo entsha, esishaya ngaphakathi kwakhe, wakwazi ukusinda, abe uphawu 'elingukungaboli ukholo ... ithemba ... uthando ... okuphakade. "
Izinkumbulo ngesenzo nobuqhawe Mary oneminyaka engu-29 ubudala nabizelwa umphefumulo esifanekisweni itshe umlandzi. Phakathi uhambo edolobheni ZaseCarpathos ethanda ukuba uphumule kuleli paki. Eduze ebhentshini kwaba niche itshe, futhi kuwo - esiveza of the Virgin Mary ephethe ingane. Khona kanye ukubukeka kwawo kwenza omunye ucabanga ngezithunywa ngamakhulu nangezinkulungwane lomama abaye babhekana ukudla ezimbi ekuphileni kwakhe kunaye. Phakathi kwawo kwakunodade owayesuka owesifazane osemusha futhi farmstead encane, ngilahleke ogwadule. Ngemva kokufika amaJalimane, washonelwa umndeni wakhe kanye ekhaya. Ngisele ngedwa endaweni, uMaria waqhubeka ukulwa basindisa labo ababedinga usizo.
"Umama Man": isifinyezo
Funda full umbhalo art imisebenzi kuyadingeka. Okuwukuphela kwendlela yokuthola ukuqonda lokho okwenzeka Heroine. Nokho, zikhona izimo lapho kungekho isikhathi, noma eseliseduze aliyona incwadi. Ezimweni ezinjalo, ukhiye ngeke kuphindze alandzise kwezahlakalo indaba.
Ajwayelane Heroine iqala incazelo nhlekelele enkulu. Vzhavshis emhlabathini onqenqemeni a cornfield, owesifazane osemusha wathandaza kuNkulunkulu ecela ukufa. Duzane wezwa ukuqhuma umlilo kukhanya kwaba ebonakalayo. Lapho, abantu - lo mbono buye baphoqa uMariya ukuba alulame. Kodwa lapho efika egqumeni lapho emkhakheni uphela, wafakaza isithombe esibi. Okufingqiwe ( "Umama yomuntu" - indaba ukuthi akuyona ukufunda lula) ayikuvumeli ukuchaza yonke indlela wakwenza Zakrutkin. Ipulazi ashisiwe, izakhamizi - Kwakukhona abangaba yikhulu - amaNazi abopha kuya samanje, futhi yabe isihamba endleleni odlulayo eduze kwensimu. Maria ukuhlukanisa ubuso wonke umuntu kulelo dolobhana. Futhi lapho kulandelana lidlule, ngokungazelelwe kwamenyezwa ukuthi izwi yentombazane. Lokhu Sasha oneminyaka engu-15 ubudala nesibindi ukweyisa amaNazi. Ngaphezu kwalokho - umlilo okuzenzakalelayo. Lapho bonke wazola, Mary, zokunqoba ukukhathala ubuhlungu, ngagaqa phezu entombazaneni. Yena wayesaphila. Kodwa isilonda kwaba ebulalayo, futhi entathakusa eshona. Owesifazane edwengula izandla usuku lonke ukumba ithuna, bese wangcwatshwa Sasha: awukwazi ukushiya umzimba akahlekwa. Ezinsukwini ezimbalwa uMariya ofihliwe esigangeni. Phakathi nalesi sikhathi, phambi sidlule ukuphila layo esidlule - retrospectives enjalo kuyagcinwa kulo umsebenzi "uMama womuntu."
Okuqukethwe imibono, izinkumbulo
Ubaba wabulawa Abamhlophe Heroine, washonelwa unina iminyaka engu-16. umakhelwane Ushadile. Ababhekana indlu ukuze siphile ngokuvumelana nothando, indodana. Ivan ngokuthi ezinsukwini yokuqala yempi, kodwa emasontweni ambalwa ngaphambi kokufika amaJalimane, wabuyela ngesandla unqanyulwe. AmaFascist emasontweni ambalwa atholiwe eseduze. Ngosuku ngesikhathi imoto yabo kwaba esekhandwe namabhomu, bona egasela emzini wafaka indoda indodana kaMariya (iminyaka engu-10 Vasyutka yambamba uyise akafunanga uyayekela). Wakhe abacindezeleke kakhulu, izakhamizi ethunyelwe le cornfield. Ipulazi abese eshiswa. Futhi ushiywe wedwa Heroine indaba "uMama womuntu." Amazwibela - ukufunda kube lula ngokomzwelo - kukwenza kungenzeki ukuba usinike Monologue kubangelwa isikhumbuzi umntwana ongakazalwa futhi ukuze aveze imizwa yakhe futhi inzondo lesitha. Toddler bophulwe umama yenza ngokuphelelwa yithemba, obiza ukufa. Phila ngambulala Ivan futhi Vasyutkoy - kuphela yilo mcabango wenza uMariya ukulwa.
Kepha owesifazane lo wayengumGreki wakhululeka lapho ebona inja izinkomo ezine kusukela epulazini - kwakukhona eziningi nezidalwa eziphilayo. Esehlise umoya kancane bese baqina ngenxa ubisi Maria wanquma ukubuyela ekhaya. lapho kuphela iphuze ebusika, "unina womuntu." Okufingqiwe (funda basadinga kakhulu indaba) isiqephu of the ukubuya umlotha ezilandelayo: umhlaba ashisayo, umlotha, ukuhogela angafi wokusha, phansi ushe izindlu nezihlahla, engasebenziseki kahle, umzimba alukho umyeni wakhe amthandayo futhi indodana, isiqinisekiso phansi emzini wakhe ... insindiso weza ngokungalindelekile. Mary zikhunjulwe emiphongolweni okunomsoco, elakhiwa kanye nomyeni wakhe. Yena, ngempela, ngasinda.
I Uzalo ku egumbini elingaphansi komhlaba, Maria wazizwa - kukhona umuntu lapho. Khona-ke wazehluka- abasha ubuso wayethukile futhi ifomu lesitha. Isifiso lokuqala - ukubhubhisa (zazibambe nemfoloko) aphindisele kokufa Ivan futhi Vasyutki. Kodwa lapho ezwa, "Mama." Ngakho kwalimala intsha German kwesokunxele ekunakekelweni wakhe. Bona okuxhunywana izibonakaliso, kepha uMariya wayesazi ukuthi amasosha baba okuningi yisisulu enjengoba enjalo. Waze waba ithemba lokuthi mhlawumbe uzoba ukusinda. Nokho, uWerner Bracht wafa, futhi eyedwa. Manje isikhathi eside.
Kancane kancane yena kubangcono ekuphileni kwansuku zonke. Waya emiseleni ayecashe kuyo futhi babeya ukuba asale ngemva namaJalimane izinto zabo: isitofu, i ijazi, a thermos, amabhokisi, njll isidumbu ezohlatshwa wabulala nehhashi njengokusho sezulu kuvunyelwe, bayahamba ukuhlala emasimini amazambane, izaqathe, beet, ummbila, ubhekilanga - kwadingeka ukuzondla futhi izilwane, ukuze ngalo kwanezelwa imvu kweshumi, izinkukhu, amahhashi ezintathu ngisho amajuba. Babeka ke engxenyeni lokusinda esibayeni. Nsuku zonke ngesikhathi Ngesineke - ngakho wazama ukusindisa ipilo lamabutho wesithathu ipulazi collective yaqanjwa Lenin, "unina womuntu." Amazwibela - ufunde wonke umbhalo kuyadingeka - awakwazi ukuveza zonke ezehlela wesifazane omncane, owashonelwa umyeni wakhe sebeneminyaka ngethando egade ababiza "krohotuley". Kodwa wahluleka. Nokho, kwaba khona icala lapho ihhashi ophasiswe ipulazi, kwacaca ukuthi, wakhe, kodwa Maria wayesaba azithola ekuso. Londoloza ingane - kwaba umgomo oyinhloko labo izinyanga.
Ngobunye ubusika, Maria uzithela izintandane eziyisikhombisa kusukela lezintandane eLeningrad. isitimela yabo yashaywa ngebhomu, othisha kanye engaphezu kwekhulu nezingane zazishiswa, futhi abasinda ecasha kushe, kokuphazamisa ukuthi uzothola. I esimnandi kakhulu kwaba yisikhathi okwakhiwa ngaso ingane eneminyaka emibili okokuqala ngokuthi unina. Owesifazane waba nomuzwa wokuthi yena ngempela wabeletha ngokwayo Vasyutku hhayi kuphela kodwa lezi izintandane Werner Bracht, zamngcwaba iRed Army Inkazimulo (yena wamthola imisele), nabo bonke abanye abantu edinga usizo kuye. Kanye izingane, wathola izinsalela nomyeni nendodana yakhe, futhi ekugcineni wathola ukuthula. Entwasahlobo ozalwa ingane oye waba phambili Ivan futhi wabulala Vasyutki. Lokhu - ne usana ngezingalo zakhe futhi ezungezwe izingane - futhi wabona umlandzi wakhe. Umkhuzi regimental, ekhuphukela owesifazane waguqa ocindezelwe esihlathini sakhe ngokumelene nesandla kancane kanzima ...
"Abantu abafana Mary, sinalo ezihlukahlukene omkhulu emhlabathini, futhi sizofika isikhathi - abantu ngibanike ezingwadule yabo ..." - la mazwi V Zakrutkina ufuna ukuqedela isifinyezo. "Umama yomuntu" - isikhumbuzo esikhulu kubo bonke toilers besifazane, continuer kanye ukuphila kohlanga lwesintu.
URobert Burns: Biography, izingoma, izinkondlo, izithombe
Andria isici kule noveli "Taras Bulba" by Gogol
"Engagement" - ukubukeka okusha at ifenisha yesimanje
Ihluzo ikhadi NVIDIA GeForce 9500 GT: Ukucaciswa, ukubuyekezwa
I Afobazol izidakamizwa libuyekeza ikakhulukazi omuhle!